लिपुलेक नेपालको नै हो भन्ने प्रमाण म जिउदै छु, मैले जनगणना गरेको हुँ (भिडियो)
काठमाडौ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले मुलुकको परराष्ट्र नीति कमजोर हुँदा भारतले दुःख दिने गरेको बताएका छन् । । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ । भारतले आफ्नो भूमि दाबी गरेर नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरामा वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना गर्न पत्रकार रिसालको टोली पुगेको थियो ।
उक्त टोलीको नेतृत्व गरेका रिसालले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्नुको कारण नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीतिलाई मान्दछन् । ‘भारतमा जो सुकैको सरकार आए पनि विदेश नीति एउटै छ’, क्यानाडानेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारपिच्छे फरक फरक देखाउँछन् ।’ भारतमा जाँदा त्यहाँका नेताहरुसँग भेट गर्न विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरेको भन्दै उनले भारतीय नेपाल आएर यहाँका नेताहरुलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि नराख्ने गरेको बताए । ‘विदेशीसँग नेपाली नेताले कोठाभित्र के के कुरा गर्छन् भन्ने केही थाहा हुँदैन, यसले पनि नेपालको सार्वभौम सत्तालाई असर गरेको छ’, पत्रकार रिसालले भने ।
भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार अग्रसर हुनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य नाकाबन्दी भन्दा पनि ठूलो हो। भारतलाई सच्याउन लगाउनै पर्छ । त्यो भूमि नेपालको मुटु हो, मुटु नै लगेपछि के बाँकी रह्यो र ।’
सीमा मिचिएको विषयमा भारतसँग नेपाल सरकारले अहिले पनि मिलाउन सकेन भने गाह्रो पर्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपाल सरकारले पुराना प्रमाणहरु जोगाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । पुराना मतदाता सूची नै फेला नपरेको पत्रकार रिसालले बताए । ‘२०१८÷१९ सालतिरको मतदाता सूची खोज्न जाँदा फेला परेन’, उनले भने, ‘प्रमाण धुलाउन चलनले प्रमाण नै नष्ट भएको छ । सरकारले पुराना प्रमाण जोगाउन सकेन ।’
एमसीसीको एम्बुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी !
क्वारेन्टिनबाट घर फर्किदै गर्दा एक पुरुषको बाटोमै मृत्यु
प्रदेश नं २ मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७०० को हाराहारीमा
मनै लोभ्याउने गोल्डेन पुल, जहाँ विश्वभरका मानिसहरु घुम्न आउँछन् !
कोरोना फैलिन थालेपछि ‘जुम एप’ को प्रयोग बढ्न थाल्यो, थपियो नयाँ विषेशता
१०३ वर्षीया वृद्धाले कोरोनालाई जितेपछि खुशी हुँदै पिइन् बियर
बसन्तपुर युथ क्लवद्वारा रुकुम जाजरकोट हत्यालाई सरकारले गम्भीरता पुर्वक लिन माग